Paikady laharam-pahamehana | TILY ETO MADAGASIKARA
1) FIROTSAHAN’NY TANORA
Fampivelarana ny hay rehetra handraisana anjara mavitrika eo amin’ny ﬁkambanana sy ny ﬁarahamonina. – Ny skotisma dia manome sehatra ny tanora hampivelaran’izy ireo ny fahaiza-manaony sy ny fahalalany hahatonga azy ireo handray anjara mavitrika eo amin’ny ﬁkambanana sy ny ﬁarahamonina. Fandraisana anjara, fankasitrahana ary ﬁfampizarana eo amin’ny olon-dehibe sy ny tanora no fanalahidin’ny fanabeazana tokony atolotra ny tanora mpikambana ao amin’ny ﬁkambanana skoto.
2) FOMBA FANABEAZANA
Ny fandaharam-panabeazana hotanterahina dia hanamafy ny traikefa hahaizana miatrika ny ho avy. – Tontolo tsy manara-draﬁtra no hiorenan’ny fandaharam-panabeazana homena ny tanora skoto, ahafahan’izy ireo manabe voa ny fahaiza-manaony hiatrehan’izy ireo ny fanambin’ny ampitso. Rehefa manintona, mamolavola ary mahatamana ny olondehibe, manana talenta, mirotsaka an-tsitrapo ny skotisma dia azo antoka ny fandaharam-panabeazana atolotra.
3) FAHASAMIHAFANA SY FIFANGAROANA
Fanomezan-danja ny fahasamihafana na isam-paritra na isan’olona. – Taratry ny ﬁarahamonina misy azy ny skotisma ary miezaka mafy handray ny karazan’olona rehetra tsy misy fanavahana. Tsy eo amin’ny mpikambana ihany no hisehoan’io fahasamihafana io fa eo amin’ny fomba sy fandaharana ampiasaina amin’ny hetsika ao amin’ny ﬁkambanana ihany koa.
4) FIANTRAIKANY ARA-TSOSIALY
Hitondra fanovàna tsara, vokatra tsara amin’ny ﬁarahamonina misy azy ny ﬁkambanana. – Mandray anjara amin’ny asa ho an’ny ﬁarahamonina ny skoto tsirairay ka mizara ny traikefany mba hitarihany ny manodidina azy hanao toy izany koa. Ireo hetsika sy tetikasa skoto no ﬁtaovana handraisan’izy ireo anjara eo amin’ny ﬁarahamonina misy azy ka hahatonga azy ireo ho mpitarika mitondra fanovàna tsara.
5) SERASERA SY FIFANDRAISANA IVELANY
Fampahafantarana ny soatoavina skoto amin’ny sehatra hafa. – Taratra amin’ny ataontsika sy ny antony hanaovantsika izany ny endriky ny skotisma, ka hisongadinan’ny soatoavina ifampizarantsika. Ny fampiasana fomba mahomby indrindra amin’ny serasera sy ny ﬁaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka mahomby ihany koa, no ahafahana mampahafantatra ny maha-hetsiky ny tanora lehibe indrindra maneran-tany ny skotisma.
Mangaharaha, mahomby ny ﬁtantanana ny ﬁkambanana. – Mangarahara, mazava ary mahomby sy mifandray mivantana amin’ny paikady mikendry ny fanatrarana ny iraka sy ny vina ny ﬁtantanana ny ﬁkambanana. Faritana mazava tsara ny asa sy ny andraikitry ny isaky ny an-tanan-toha-pitantanana ao amin’ny ﬁkambanana, mba ho azo sy tena ilaina. Rehefa izany no tanteraka dia azo antoka ny ﬁrindran’ny seha-pitantanana rehetra eo amin’ny ﬁkambanana skotisma maneran-tany ka hahazo vokatra mahomby isika.
Ny ﬁvoriamben’ny skoto eran-tany tany Ljubljana, Slovenia ny taona 2014 no namaritra ny paikady laharam-pahamehana.
Manoloana izany dia namolavola vina, tarigetra manokana ho an’ny Skotisma Malagasy ny Foibe Tily eto Madagasikara, mifandraika amin’ireo iraka sy vina napetraky ny Biraon’ny Skotisma Maneran-tany.